आईजीपीको फिटनेस रहस्य - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ प्रोफाइल ∕ आईजीपीको फिटनेस रहस्य
आईजीपीको फिटनेस रहस्य
हेल्थ आवाज शनिबार, २०७६ असार २१ गते, १८:०४ मा प्रकाशित
कुमार घैटे इन्काउण्टरदेखि नेपाली फुटबल म्याच फिक्सिङको अन्तर्राष्ट्रिय जालोलाई पर्दाफाँस गरेर चर्चा आएका सर्वेन्द्र खनाल यतिखेर नेपाल प्रहरी २६ औं महानिरीक्षक (आईजीपी) छन् । तनहुँमा जन्मेका उनी २०४६ सालको माघमा प्रहरी निरिक्षक (इन्स्पेक्टर)का रुपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । ‘प्रहरी प्रहरीजस्तो हुनुपर्ने’ मान्यता राख्ने खनालकै सक्रियतामा तराईंले सशस्त्र समूहको त्रासबाट मुक्ति पाएको थियो । उनको प्रहरीभित्र निडर र साहसिक छवि छ ।
५३ वर्षीय खनाल ब्यक्तित्व तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै फिट र आकर्षक देखिन्छन् । ७२ हजारको प्रहरी फोर्सको नेतृत्व गरिरहेका खनालमा न कुनै चिन्ता छ, न त कुनै तनाव नै । उनी ‘स्टेट फरवार्ड’ शैलीका छन्, त्यही शैलीमा काम गर्ने उनको स्वभाव छ । खनालको अनुहारमा हमेशा ताजगी झल्किन्छ । आखिर उनको फिटनेशको रहस्य के हो ? फिटनेसको कुनै त्यस्तो स्पष्ट फर्मुला छ ? हेल्थआवाज डटकमले खनालको दैनिक जीवनशैली चिहाउने प्रयास गरेको छ ।
आईजीपी खनाल विहान सबेरै उठिसक्छन् । उनलाई चाडोमा ४ बजे र ढिलोमा ५ बजेसम्म निन्द्राले छोडिसक्छ । ‘सामान्तयाः विहान जाहेरी हुने भएकाले पाँच, साढे पाँच बजेसम्म उठिसक्छु,’ उनी भन्छन् । केही समय उनी बेडमै बस्छन्, बेडबाट निस्कँदा साढे ६ बजिसक्छ । बेडमा रहँदा खनाल कहिलेकाही किताब पढ्ने, कहिले पत्रपत्रिका हेर्ने र कहिलेकाहीँ बेडबाटै निर्देशनहरु दिने काम गर्छन् । त्यसपछि उनी नियमितजसो कसरत गर्छन् । ब्याण्डमिन्टन र लन टेनिस खेल्छन् । कहिलेकाही योग पनि गर्छन् ।
आईजीपी खनालको खानपान सामान्य छ । उनी सधैं यस्तै खान्छन् भन्ने छैन । कहिलेकाही कार्यक्रममा जानुपर्ने र समय लाग्ने छ भने सेवाइ, ओटजस्ता खानेकुराहरु खाएर निस्कन्छन् । समय लाग्ने गरी बाहिर निस्कँदा कहिलेकाही दुध र बिस्कुट पनि लिन्छन् ।
उनी विहानको खानामा भुजा, दुध र हरियो सागपात लिन्छन् । त्यसैमा टमाटरको अचार र अन्य तरकारी पनि हुन्छ । दिउँसोको खाजाका रुपमा उनी सामान्यतयाः फलफूल लिन्छन्, पाइने अवस्थामा भयो भने नरिवलको पानी खान रुचाउँछन् । तर, सधैं नै यही खाजा भन्ने हुँदैन्, बाहिर निस्किएको बेलामा उनी जेमा पनि ‘एडजस्ट’ गर्छन् । ‘मिलेसम्म म नरिवलको पानी खाइरहेको हुन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘बाहिर निस्किएका बेला खाजामा जे पाइन्छ, त्यही लिन्छु ।’ साँझपखको खानामा प्रायः खनाल भुजा लिदैंनन् । कहिलेकाही ‘ग्यादरिङ’ भएका बेला उनी चिकेनका लिन्छन् । नत्र भने कहिलेकाही ब्रेड त कहिलेकाही रोटीले साँझको खान्की टर्छ । ‘सामान्यतयाः साँझ भात खाँदिन्,’ उनी भन्छन् ।
राति सुत्ने समय पनि उनको खासै नियमित यही समय भन्ने छैन् । सामान्यतयाः ११ बजे आईजीपी खनाल सुतिसक्छन् । तर, कहिलेकाही कामको चाप भएकाले बेला उनी साढे ११ देखि १२ बजेसम्म पनि सुत्छन् ।
खेलकूदमा उनलाई सबैभन्दा मनपर्ने खेल फुटबल हो । उनी हेर्नका लागि फुटबल मन पराउँछन्, खेल्नमा पनि उनलाई मनपर्ने गेम फुटबल नै हो । तर, अहिलेसम्म फुटबल खेल्ने अवसर भने उनलाई जुरेको छैन । ‘म आफै धेरै खेल्ने भनेको त ब्याडमिन्टन हो,’ उनी भन्छन्, ‘टिम हुँदा बाँस्केटबल पनि खेल्छु ।’
रिफरेसमेण्टका लागि उनी आउटिङ रोज्छन् । वरपरका शान्त हरियाली डाँडाकाँडाहरु उनलाई खुबै मन पर्छन्, त्यस्ता ठाउँहरुमा जाँदा पोलुसन पनि कम भएको अनुभूति उनलाई हुन्छ । ‘शान्त र हरियाली मन पर्छ, त्यसैले वरपर डाँडाकाँडामा गएर केही समय बिताउँदा आनन्दको अनुभूति हुन्छ,’ उनले आफ्नो रिफरेसमेन्टको सुत्र सुनाए ।
सिंगो प्रहरीको कमाण्ड सम्हाल्ने सर्वेन्द्र स्ट्रेस भने उति लिदैंनन् । भूकम्पको समयमा उनी काउन्सिलिङको प्रमुख भएर भूकम्प अतिप्रभावित सबै जिल्ला घुमे । त्यहाँ गएर प्रहरी तथा सर्वसाधारणलाई काउन्सिलिङ गर्ने काम गरे । तनाव रिलिफमा काम गरेकैले होला, उनी उति तनाव लिदैनन् । बरु, उनी चिन्ता गर्नेभन्दा चिन्तन गर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘कसरी राम्रो रिजल्ट दिने, कसरी राम्रो गर्ने भन्ने चिन्तन गर्नु स्वभाविक हुन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘चिन्ता मात्रै ग¥यो भने काम हुँदैन, त्यसैले सकभर म चिन्तनमै बढी समय बिताउँछु ।’ उनी प्रायःजसो दैनिक सम्पादन गर्नुपर्ने कामका विषयमा विहान आधा घण्टाजति चिन्तन गर्छन् ।
स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि खनालको स्पष्ट रुटिन छैन् । समय मिलेका बेला कहिलेकाही चेकअप भने गराइरहेका हुन्छन् । अहिलेसम्म उनको स्वास्थ्यमा खासैं समस्या छैन् । त्यसो भए एकदमै चम्किलो र आकर्षक देखिने आईजीपी खनालको स्वास्थ्यको असली राज के होला त ? भन्छन्, ‘एक त मेरो धेरै तनाव लिएर काम गर्ने बानी छैन, कुनै काम आइपरे गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्ट पनि म मा छ, त्यसैले चिन्ता गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन् । राम्रो कामका लागि चिन्ता गरिरहनु पर्दैन ।’ खनालमा रहेको यही पोजिटिभीटी पनि उनको स्वास्थ्य तथा इनर्जीफूल जीवनशैलीको कारक हो । खानपान, योगा, पोजिटिभी, कसरतजस्ता कुराहरुले उनलाई फिट राखेको छ ।
दुधका परिकारका पारखी
आइजिपी खनाललाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने खाने कुरा के होला ? सामान्यतयाः उनलाई दुधका परिकारहरु बढी मन पर्छन् । दुधका परिकारहरुमा उनलाई सर्वाधिक मनपर्ने खुवा, पेडा र दुध मलाई हुन् । उनी पाउँदासम्म अग्र्यानिक खानेकुराहरुमा जोड दिन्छन् । गान्टेमूला, बकुल्ला, चिचिण्डो र हरियो केराउ उनलाई बढी मनपर्ने तरकारीहरु हुन् ।
गुलियो र तारेको खानेकुराबाट टाढा
खनालको सबैभन्दा राम्रो पक्ष खानामा जथाभावी नहुनु पनि हो । उनी चिल्लो र तारेको खानेकुरालाई प्रायः अभोइड गर्छन् भने रेड मिटबाट पनि टाढै रहन्छन् । गुलियो पनि उनको खानपिन मेनुमा अटाउँदैन् । फ्राइडमा पकौंडाहरु, ब्रेडजस्ता खानेकुराबाट सकेसम्म टाढै रहन्छन् । खनालको नरिसाउने स्वभावले पनि उनको स्वस्थ्य जीवनशैलीलाई टेवा पु¥याइरहेको छ ।
क्याटेगोरी : प्रोफाइल, सौन्दर्य स्वास्थ्य
मेडिकल अंकोलोजिस्ट एण्ड हेमाटोलोजिष्ट डा. प्रकाश, जो नेपाली क्यान्सर बिरामीको…